» सुरेश लामा र रोश्ना लुङ्वाको ‘रोशी त खोलाको तिरैमा’ सार्वजनिक
सुरेश लामा र रोश्ना लुङ्वाको ‘रोशी त खोलाको तिरैमा’ सार्वजनिक
१४ असार २०७६, शनिबार ११:४९
चन्द्र घलान, मकवानपुर, १४ असार । गायक सुरेश लामा र गायिका रोश्ना लुङ्वाको ‘रोशी त खोलाको तिरैमा’ बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । जिग्मे मिडियाको अफिसियल युट्युब च्यानलमार्फत सार्वजनिक भएको गीतको म्युजिक भिडियोलाई दर्शकले निकै रुचाएका छन् । दर्शकको रोजाईमा परेकै कारण यस म्युजिक भिडियोलाई सार्वजनिक भएको २४ घण्टा नपुग्दै १० हजारभन्दा बढी पटक हेरिएको छ ।
गीतको शब्द, सँगीत, एरेञ्ज तथा मिक्सिङ आर.बि. सिंतानले गरेका छन् । गीतलाई हलेसी म्युजिक स्टुडियोमा रेकर्ड गरिएको हो । चर्चित नायिका सुस्मा मोक्तान र नायक आरम्भ तामाङको फिचरिङ गरिएको म्युजिक भिडियोमा कृष्ण ब्लोनको निर्देशन, कोरियोग्राफी तथा सम्पादन रहेको छ । जिग्मे मिडियाको पोष्ट प्रोडक्सनको जिम्मा लिएको भिडियोलाई सूर्य लामाले छायाँकनका साथै कलरिङ गरेका हुन् ।
कलाकारहरुलाई दिया रिजालले सिँगारेकी हुन् । यो समाचार तयार पार्दाको समयमा गीतमा करिब ७ सय लाईक र १ सय कमेन्टहरु गरिएका छन् । हेर्नुहोस् भिडियो–
तामाङ कथानक चलचित्र ‘घ्रान’ (कसम) हेर्न दर्शकहरुको ओईरो लागेको छ । शनिबार काठमाडौँ जमलस्थित राष्ट्रिय नाचघरमा भएको पहिलो प्रिमियर शोमा दर्शकहरुको ओइरो लागेको हो । कानून, न्याय तथा संसदीय व्यबस्था मन्त्री शेरबहादुर तामाङको प्रमुख आतिथ्यता तथा चर्चित नायिका सुकुमाया मोक्तानको अध्यक्षतामा भएको प्रिमियर शो मा चलचित्रकर्मी, पत्रकार, बुद्धिजीवि, चलचित्र समिक्षकका साथै दर्शकहरुको ठूलो जमातको सहभागीता रहेको थियो ।
चलचित्रका नायक सागर घिसिङ,नायिका सुष्मा मोक्तान, विकास स्याङ्तान, सुकुमाया मोक्तान, शम्भु घिसिङ, सुनिता थिङ, पुसन लामा, राम घिसिङ, मुस्कान तामाङ (चन्द्र ग्याबक) लगायतको टोलीसँगै दर्शकहरुले फिल्म हेरेका थिए । चलचित्र हेर्न तामाङ कला तथा चलचित्र क्षेत्रका चर्चित हस्तीहरु नायक अमिर दोङ, हुत्त सञ्जय लामा, चर्चित खलनायक बिकु थोकर, नायिका खुशी घिसिङ, सुनिता लुङ्वा, चर्चित गायक विश्व दोङ लगायतको उपस्थिति रहेको थियो । औपचारिक कार्यक्रममा चर्चित गायक विशाल काल्तान, , जनता टेलिभिजनका पत्रकार दिपेन्द्र दोङ र विश्वको सर्वोच्च हिमशिखर सगरमाथा आरोही लक्मी तामाङलाई सम्मान गरिएको थियो । कार्यक्रममा गायक तथा नायक शम्भु घिसिङको ‘मञ्जुर’ गीति एल्बमको समेत विमोचन गरिनुका साथै चर्चित गायक विशाल काल्तान, जितु लोप्चन तथा आरके योञ्जनले चर्चित गीतहरु क्रमशः ‘तिङ मि ढुकढुक’ र ‘ए बिना ङा’ लाईभ पर्फोमेन्स् दिएका थिए ।
प्रिमियर शोको उद्घाटन गर्दै मन्त्री तामाङले तामाङ चलचित्रमाथिको कानूनी समस्याहरु समाधान गर्ने ‘घ्रान’ समेत खाएका छन् । उनले तामाङ चलचित्र माथिको कानूनी समस्याहरु समाधान गर्ने बताए । त्यस्तै तामाङ चलचित्र संघका अध्यक्ष जेनिस दोङले तामाङ चलचित्रमाथि विभेद गरेको गुनासो पोखे ।
प्रदर्शन अगावै गीत–संगीत, प्राविधिक पक्ष र दमदार ट्रेलरका कारण चर्चामा रहेको चलचित्र ‘घ्रान’ प्रिमियर पश्चात दर्शकहरुले प्रतिक्रिया दिँदै चलचित्रले नेपाली चलचित्रजस्तै मेन स्ट्रीम चलचित्रको स्वाद पस्कन सफल भएको बताएका छन् । चलचित्रले तामाङ चलचित्रको इतिहासमा नयाँ प्रयोग गरेको भन्दै प्रशंसा समेत गरिएको छ । चलचित्रलाई ओखलढुङ्गाको मूलखर्क गाउँमा खिचिएको छ । जनयुद्धका समयमा गाउँमा ठूलाबडाले गरेका अत्याचारको कथा बोकेको चलचिलाई नेपाली भाषामा समेत डबिङ गरी अल नेपाल रिलिजको तयारी गरिएको छ । चलचित्रमा अमृत लामा र सागर घिसिङको कथा छ । चलचित्रलाई राम घिसिङ, शम्भु घिसिङ, र सागर घिसिङले निर्माण गरेका हुन् । जनक गुरुङले निर्देशन सम्हालेको चलचित्रको छायांकन बिक्रम लामा र सम्पादन बज्र न्यासुरले गरेका छन् ।
पछिल्लो समय तामाङ भाषामा बनेका गीत–संगीत, म्यूजिक भिडियोका साथै तामाङ चलचित्रहरुले चर्चा पाउने क्रम सुरु भएको छ । नेपाली भाषाका मेन स्ट्रिम चलचित्र जस्तै कमर्सियल र उत्कृष्ट चलचित्रका रुपमा पछिल्लो पटक तामाङ कथानक चलचित्र ‘घ्रान’ (कसम) ले आफुलाई उभ्याउन सफल भएको छ । साउन ५ गते पहिलो प्रिमियर शो गरिएको चलचित्र हेरिसकेपछि दर्शकले दिएका कमेन्टहरु तथा आफ्नो समेत समिक्षाका आधारमा चलचित्रका राम्रा र सुधार्नु पर्ने पक्षलाई मैले जस्ताकोतस्तै प्रस्तुत गरेको छु ।
‘तामाङ चलचित्रमा टर्निङ प्वाईन्ट’
चलचित्र ‘घ्रान’, तामाङ कथानक चलचित्रको टर्निङ प्वाईन्ट हो भन्दा अन्यथा अर्थ नलाग्ला । चलचित्रले बोकेको कथामा नौलोपन खोज्न सकिन्न तर त्यही कथाले नयाँ प्राथमिकतालाई तामाङ चलचित्रको क्षेत्रमा प्रवेश गराइदिएको छ ।
यस अघि बनेका र प्रदर्शनमा आएका सफल र असफल तामाङ चलचित्रहरुले कुनै न कुनै रुपमा तामाङ भाषा, संस्कृति र ईतिहासको कथा भन्थ्यो । त्यही संस्कृतिको वरिपरि कथा घुम्थ्यो र सकिन्थ्यो । तर ‘घ्रान’ त्यस्तो चलचित्र हो जसले न संस्कृतिको कुरा गर्छ न त भाषा र धर्मको नै । यो बदलाको कथा हो । द्वन्दकालको एउटा कथालाई ओखलढुङ्गाको मुलखर्कमा लगेर विजारोपण गरिएको छ । चलचित्र हेर्दा यस्तो लाग्छ यो मुलखर्ककै एउटा अदृश्य र अकल्पनीय कथा हो । चलत्रिको यस शैलीबाट तामाङ चलचित्रलाई कमर्सियल दृष्टिकोणले समेत निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको सुरुवात भएको छ । अमृत लामा र नायक सागर घिसिङको कथाले यही एउटा कथालाई मुख्य विषयवस्तु बनाएर त्यसको वरिपरि पात्रहरुलाई मुर्तरुप दिएका छन् । तर परम्परागत रुपमा चल्दै आएको ट्रेण्डलाई एक्कासी परिवर्तन गर्दा त्यसलाई सहजै पचाउन तामाङ चलचित्रका दर्शक तथा समिक्षकलाई भन्दा पनि तामाङ चलचित्रका कलाकार तथा चलचित्र निर्माण टिमलाई नै अलि अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था भने रहेको छ । घ्रान परिवारको नयाँपनलाई अन्य तामाङ चलचित्रकर्मीले समेत अंगाल्ने हो भने त्यसले तामाङ चलचित्र क्षेत्रमा नयाँ युगको सुरुवातमा थप टेवा पुग्ने छ । तामाङ चलचित्रलाई व्यवसायिकता तर्फ लान चलचित्रले ठूलो भूमिका समेत खेलेको छ ।
‘बलियो प्राविधिक पक्ष’
केही ठाउँमा भएका अपुग प्रयासलाई नजर अन्दाज गर्ने हो भने ‘घ्रान’ आफैमा एउटा बलियो प्राविधिक पक्ष भएको चलचित्र हो । तामाङ चलचित्र निर्देशनको ट्रेण्डलाई समेत नयाँ रुप दिँदै चलचित्रको निर्देशनको जिम्मा जनक गुरुङलाई दिइएको थियो जसलाई उनले न्याय गरेका छन् । चलचित्रको क्लाईमेक्सलाई नलम्ब्याएर केही छोट्याइएको भए अझ दमदार हुनसक्ने ठाउँमा ध्यान दिन भने उनी अलि चुकेका छन् । तर समग्रमा गुरुङले प्रशंसा योग्य काम गरेका छन् ।
चलचित्रको बलियो आधारका रुपमा रहेको छायांकनको जिम्मा लिएका बिक्रम लामा र सम्पादनको जिम्मा लिएका बज्र न्यासुरको कामलाई दर्शकले ताली पिट्छन् । सूर्य लामाको कलरिङ तथा भिएफएक्सलाई दर्शकले भुल्न सक्दैनन् । यस अघिका केही तामाङ चलचित्र बाहेक अन्य तामाङ चलचित्रमा ब्याकग्राउण्ड स्कोरका रुपमा हिन्दी तथा नेपाली चलचित्रका ब्याकग्राउण्ड स्कोरलाई प्रयोग गरिएता पनि घ्रान परिवारले यसमा नयाँ सुरुवात गरिदिएका छन् । फराज अर्पणले ब्याकग्राउण्ड स्कोरको जिम्मा लिएर तामाङ चलचित्रमा स्वतन्त्र ब्याकग्राउण्ड स्कोरको नयाँ ईतिहास कोरिदिएका छन् । केही स्थानमा युट्युबको अडियो लाईब्रेरीबाट कपिराईट नहुने साउण्डको प्रयोग गरिएको भएता पनि अन्य सबै ब्याकग्राउण्ड स्कोर जेनुईन हुन् । पहिलो प्रयोग भएका कारण ब्याकग्राउण्ड केही लाउड सुनिएको छ जसलाई आगामी दिनमा यो टिमले अवश्य सुधार्ने छ भन्ने अपेक्षा दर्शकको छ । तामाङ चलचित्रमा ‘ड्रोन’ को अत्याधिक प्रयोग गरिएको पहिलो चलचित्र नै ‘घ्रान’ हो भन्दा फरक नपर्ला ।
‘ईतिहास रच्न सफल गीत–संगीत’
चलचित्र ‘घ्रान’ को अधिकांश गीतहरु चर्चामा छन् । तामाङ चलचित्रको गीतसँगीतको ईतिहासमा नै सबैभन्दा बढी भ्यूज पाउन सफल ‘तिङ मी ढुकढुक’ बोलको गीत चलचित्रको खम्बाहरु मध्ये एक हो । त्यस्तै ‘सारी आरे’ र ‘च्यागो’ बोलको गीत पनि उत्तिकै चर्चित छन् । चलचित्रको गीतलाई कुमार स्याङ्बो र अन्नु लामा (सुक्रनी दोङ) ले चर्चित बनाउका लागि उत्कृष्ट शब्द लेखेका छन् ।
विशाल काल्तान, जितु लोप्चन, निमा दोङ, निर्मला घिसिङ, शम्भु घिसिङ, दिपा लामा र अञ्जु पन्तको आवाजको प्रशंसा नगरी रहन सकिन्न । विशाल काल्तान, अमृत लामा, निमा दोङ र कृष्ण काफ्लेको संगीतलाई दर्शकले बिर्सदैनन् । त्यस्तै कोरियोग्राफर अजय स्याङ्तानको रोमान्टिक मुभ्सलाई दर्शकले उत्तिकै माया गर्छन् ।
चलचित्रमा कथा अनुसारको पात्र छान्नमा घ्रान टिमले कुनै कञ्जुस्याँइ गरेको देखिन्न । चलचित्रमा दोहोरो भूमिकामा देखिएका नायक सागर घिसिङको ४० वर्षे स्वरुप र लक्का जवानको हिरो लुक्स र अभिनय दुबैले दर्शकको मन जित्न सक्छ । नायिका सुष्मा मोक्तानको सुन्दरतासँगै एक्सन र अभिनयले दर्शकलाई लोभ्याउँछ ।
चलचित्रमा खलपात्रका रुपमा देखिएका विकास स्याङ्तान, नायिका सुकुमाया मोक्तान र असईको भूमिका देखिएका मुस्कान तामाङ चलचित्रका खम्बा हुन् । उनीहरुको अभिनयलाई दर्शकले सजिलैसँगै टप स्टार मेन्सन गरिदिन्छन् । भूमिका अनुसारको अभिनयमा उनीहरु पाराङ्गत देखिन्छन् । नायक शम्भु घिसिङ, सुनिता थिङ र पुसन लामालाई पनि चलचित्रमा भुल्न सकिन्न । राम घिसिङ,रामचन्द्र तामाङ, कर्मा घिसिङ, कुन्साङ तामाङ, योगेश मोक्तान, सरोज तामाङ, प्रशान्त तामाङका लगायतका कलाकारको पनि सशक्त भूमिका चलचित्रमा हेर्न पाईन्छ ।
कस्तो छ चलचित्रको कथा ?
चलचित्र घ्रान मुलत एक्सन चलचित्र हो । फरक ट्रेण्डमा निर्माण भएको चलचित्रले बदलाको कथा बोकेको छ । सुन्दर मुलखर्कको दृश्यसँगै काँधमा सुटकेस बोकेर गाउँ छिरेको परदेशीको कथाबाट सुरु हुन्छ ‘घ्रान’ को कथा । बले जो श्रीमतीलाई असाध्यै माया गर्छ, उनीहरुका दुई छोराहरु छन् नेमा र दावा । ती दुई छोराहरुलाई उनीहरु जति माया गर्छन् त्यत्तिकै माया एकअर्कालाई पनि गर्छन् ।
‘म मरे भनेँ छोराहरुलाई ठूलो मान्छे बनाउनु है ’ भन्ने बलेको वाक्यसँगै उनकी श्रीमतीको पिडा मीश्रीत जवाफले दर्शकको आँखा रसाउँछ । नेमा र दावाको रमाईलो संवादले कहिलेकाँही दर्शकलाई हँसाउँछ पनि । मुलखर्कको एउटा डन छ ‘चक्रे’ यो पात्रकै कारण चलचित्रको कथामा उथलपुथल मच्चिन्छ, बले र उनकी श्रीमतीको प्रेमिल संसारलाई समेत चक्रेको ज्यादतिले पोलिदिन्छ । मुल मुलखर्क गाउँ नै चक्रेको आतंकले समसान बन्छ । यस्तो अवस्थामा कथाले कस्तो मोड लिन्छ ? यो कौतुहलता मेटाउन भने तपाईँले चलचित्र नै हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
मिलनको मोहनी मन्त्रमा मेलिना राईको आवाज मिसिएपछि तहल्का मच्चियो
चर्चित गीतकार तथा कलाकार मिलन पाख्रिनको ‘मोहनी मन्त्र’ बोलको गीतको भिडियो सार्वजनिक भएसँगै उनको चर्चा थप चुलिएको छ । पाख्रिनको शब्द तथा प्रस्तुतीमा बनेको ‘मोहनी मन्त्र’ मा चर्चित गायिका मेलिना राईले सुमधुर आवाज दिएकी छिन् । गायक तथा संगीतकार जोगलाल लामाको संगीत संयोजनमा बनेको गीतको म्यूजिक भिडियोमा निरञ्जली लामा र प्रकाश घिसिङको रोमान्टिक अभिनय छ । साथै बालकलाकार इन्सा पाख्रिन र ओसिना लामाको अभिनयलाई समेत भिडियोमा देख्न सकिन्छ । भिडियोको निर्देशन गरेका अमिर दोङ भिडियोमा गेष्ट रोलमा देखिएका छन् ।
म्यूजिक भिडियोमा बिक्रम लामा मोक्तानले गोकर्ण क्षेत्रको मनोरम दृश्य क्यामेरामा कैद गरेका छन् । म्यूजिक भिडियोकी मूख्य नायिका निरञ्जलीसँग एकोहोरो प्रेम गर्ने प्रकाशले अन्तमा निरञ्जलीको रोजाईलाई आत्मासाथ गर्दै उनीहरुलाई बधाई दिएको दृश्य समावेश गरिएको छ । म्यूजिक भिडियोलाई डम्फु मिडिया प्रा.लि.को अफिसियल युट्युब च्यानल मार्फत सार्वजनिक गरिएको हो । यो सामाग्री तयार पार्दाको समयमा यस म्यूजिक भिडियोलाई २५ हजारभन्दा बढी पटक हेरिएको छ भने भिडियोमा करिब ६ सय लाईक र एक सयभन्दा बढी कमेन्टहरु गरिएका छन् ।
बाबु मोक्तानको ‘सोल्टिनी सारै मन पर्यो’ सार्वजनिक, भिमफेदी गाईजको दमदार प्रस्तुति
सेलो तथा आधुनिक नेपाली गीतका क्षेत्रमा चर्चा कमाउन सफल बाबु मोक्तान (बि.एल.) को नयाँ गीतको म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । मोक्तानको आवाज तथा भिमफेदी गाईजको फिचरिङ रहेको म्यूजिक भिडियो युट्युब मार्फत सार्वजनिक भएको एक साता नपुग्दै यसलाई एक लाखभन्दा बढी पटक हेरिएको छ । गायक मोक्तानसहित आशुसेन लामाको शब्द र संगीत रहेको गीतलाई बबीराज घतानीले एरेन्ज गरेका हुन् । सार्वजनिक गीतको म्यूजिक भिडियोलाई यो सामाग्री तयार पार्दाको समयमा १लाख ३ हजार भन्दा बढी पटक हेरिएको छ भने म्यूजिक भिडियोमा ४ हजारभन्दा बढी लाईक र ४ सयभन्दा बढी कमेन्टहरु गरिएका छन् ।
भिमफेदी गाईजका निर्मल लामा, मिथुन लामा, मनजीत लामा, अञ्जन लामा, सबिन लामा सहित रिना राई, मञ्जु लामा र पासाङ तामाङको अभिनय रहेको गीतको भ्यूडियोमा भिमफेदी गाईजकै कोरियोग्राफी रहेको छ । निर्मल लामा (बि.जी.) निर्देशन गरेको भिडियोमा विशाल सुस्लिङले छायाँकनको जिम्मा लिएका छन् । रोजगारीका सिलसिलमा कोरियामा रहनुभएका गायक मोक्तानले एक दशकभन्दा अगाडिदेखि संगीत यात्रा सुरु गरेका हुन् । उनले यस अघि नै ‘विधाता’ एल्बमबाट चर्चा कमाएका थिए । उक्त एल्बममा समावेश ‘जोमसोम बजारमा’, मिठो घात , परदेशी दाजु जस्ता गीत समावेश गरिएको थियो । सार्वजनिक भएको ‘सोल्टिनी सारै मन पर्यो’ बोलको गीत उनको ‘वेदनाको घाउ’ एल्बममा समावेश गरिएको छ ।
गायक मोक्तानले यस एल्बममा स्याउ खानु रसिलो मार्फाको , हृदयमा वेदनाको घाउ , धेरै नसा पिउने बानी जस्ता गीतहरु समावेश गरी सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका छन् । सार्वजनिक गीतलाई राधा लामाले निर्माण गरेका हुन् ।
पहिलो प्रिमियर शो पछि थप चर्चा कमाएको तामाङ कथानक चलचित्र ‘सेमरीन मुला माया’ को ‘घ्याल्मो दोसी मिरी छ्याजी’ बोलको गीत चर्चामा रहेको छ । चर्चित गायक निमा दोङ र चर्चित गायिका जितु लोप्चनको सुमधुर आवाजमा सजिएको गीतमा प्रेमिल शब्दहरुको प्रयोग भएका कारण युवा दर्शक–श्रोताले गीतलाई विशेष मन पराएका छन् ।
प्रेमिल जोडीहरुको मन छुने गरी चर्चित गीतहरु लेख्न सफल चर्चित गीतकार कुमार स्याङ्बाको शब्द तथा प्रयाश दोङको संगीत रहेको यस गीतमा नायक हुत्त सञ्जय लामा र नायिका खुशी घिसिङको जोडीले समेत दर्शकले उत्तिकै मन पराएका छन् ।
अजय स्याङ्तानको कोरियोग्राफीमा निर्माण भएको चलचित्रको यस गीतलाई यो सामाग्री तयार पार्दाको समयमा १ लाख ७६ हजारभन्दा बढी पटक हेरिएको छ । भिडियोमा १ हजार ३ सयभन्दा बढी लाईक र डेढ सयभन्दा बढी कमेन्टहरु गरिएका छन् । चलचित्रलाई पुस १३ गतेदेखि अल नेपाल रिलिजको तयारी समेत गरिएको छ ।